Manome ity fijoroana ho vavolombelona ity aho amin’izao fotoana izao satria nampanantena azy ireo aho fa handeha hatraiza hatraiza amin’ny aterineto, Facebook, hizara ireo asa tsara, raha toa ianao ka mitady hividianana karazana fampindramam-bola rehetra, dia manoro hevitra anao aho mba hifandray amin’izy ireo, , Mankasitraka lisitra, manaiky fotsiny ny Payslips anao, Tsidiho fotsiny ny trosanao antoka ary ny vola fampindramam-bola dia haverina ao amin’ny kaontinao ao anatin’ny latsaky ny 48 ora. Tsy mazava pass’nao – Lôla. Lôla – Ilazao Izy Fa. Mila vola avy hatrany ve ianao handoa ny trosanao na Mila trosa hanatsarana ny orinasa ve ianao? Nifandray tamin’izy ireo aho ary nanolotra ahy ny Loi Business ho fanamafisana ny trosako rehetra sy hampitombo ny asa fiompiako. Andramo ary hahazo ny ATM karatra fotsy ankehitriny sy ho amin’ny tsara vintana ny olona izay mandray soa avy amin’izany karatra. Asa na azonareo le zavatra tiako atongavana ; ny madame efa manam bady rehetra ange sao tsy fantatrareo fa ireny no tena mankafia eh.
Ok lola vo pita ny hafatra merci. Merci LoLa mafinaritra be ny iranao. Satriko mba manana olona hoatra anaozao zah eo amin’ny fiainako. Contact us izao amin’ny alalan’ny cash. Fenoy izany ary hahazo indray any amintsika amin’ny alalan’ny mailaka ho davidpetersonloanfirm1 outlook. Nifandray tamin’izy ireo aho ary nanolotra ahy rena Loi Business ho fanamafisana ny trosako rehetra sy hampitombo ny asa fiompiako.
Lehilahy efapolo taona no manoratra eto.
Efa nisy nitady findramam-bola? Andramo ary hahazo ny ATM karatra fotsy ankehitriny sy ho amin’ny tsara vintana ny olona izay mandray soa avy amin’izany karatra.
Mifandraisa aminay dieny izao, ho fampahalalana bebe kokoa sy fampiharana. Mba andefaso olona antsika amin’ny alalan’ny mailaka morrisonaniems consultant.
His name is Jonny Belter. Mila anao foana Tempo gaigy. Tsy be resaka tsika fa »action ».
Ny zava-mampahory anao dia efa tapitra satria eto izahay mba hametraka ny olana ara-bola rehetra anananareo amin’ny lasa. Newer Post Older Post Home. Andriamanitra anie hitahy anareo rehetra Bola orinasa ity dia naorina tamin’ny alalan’ny fikambanana mpiaro ny zon’olombelona manerana izao tontolo izao ny hany tanjona ny fanampiana ny mahantra sy ny olona amin’ny olana ara-bola eo amin’ny fiainana.
Moa ve ianao mila bola? Tsy te hanao sain-jaza maroroka na hidera tena fa raha mety dia tsara raha mametraka mail diamifanoratra. Partager sur Facebook Partager sur Twitter. Mariho ny valiny rehetra dia tokony ho kopia ary alefaso amin’ity mailaka ity wenzelronaldjoseph gmail.
Mila vola ny manomboka amin’ny raharahan’ny hafa? Do Rajonhson Lola Ho antsika. Ao amin’ny Cash Vahaolana Investment Ltd.
Io biby io no taingenany. Please izany dia ho an’ny lehibe saina sy matahotra an’Andriamanitra ny olona, dia eto mba hanampy ireo izay mila fanampiana. Efa manana sary maro vonona aho izao.
Misaotra anao sy Andriamanitra anie hitahy Ramatoa Elena. Monday, May 28, Mpamosavy mitaingina lambodia tarihana vorondolo 4. Satriko mba manana olona hoatra anaozao zah eo amin’ny fiainako.
Manome ity fijoroana ho vavolombelona ity aho amin’izao fotoana izao satria nampanantena azy ireo aho fa handeha hatraiza hatraiza amin’ny aterineto, Facebook, hizara ireo asa tsara, raha toa ianao ka mitady hividianana karazana fampindramam-bola rehetra, dia manoro hevitra anao aho mba hifandray amin’izy ireo,Mankasitraka lisitra, manaiky fotsiny ny Payslips anao, Tsidiho fotsiny ny trosanao antoka ary ny vola fampindramam-bola dia haverina ao amin’ny kaontinao ao anatin’ny latsaky ny 48 ora.
Tsy io irery fa antsoiny koa ny vorondolo miisa efatra. Raha mila fampindramam-bolam-bola ianao na fitanam-bola? Ny fena Lola Mifandraisa aminay dieny izao ho an’ny fampindramam-bola fohy sy maharitra anao.
Na inona na inona ny isa nomenao credit. Any afaka mifampiresaka tsara; apetrako ihany ny adresse mail ‘ à toutes fins utiles’ coeurtedre gmail. Amin’ny alàlan’ny fifanarahana ara-drariny, Ny trosa dia azo alaina ary alefa any amin’ny mpampisambotra ny fotoana fohy indrindra.
Samy manana ny anarany izy ireo: Na izany tenq, ny fomba fiasanay, dia manolotra anao ny fahafahana hilaza ny habetsaky ny trosa mila ary koa ny fe-potoana azonao aloa EMAIL: Contact us izao amin’ny alalan’ny cash.
We are dynamic, azo itokisana, mahomby ary matoky ny mendrika.